Fluxbox, FLWM, FVWM, Haze na Herbstluftwm: WM ndị ọzọ 5 maka Linux | Site na Linux
Taa, anyị ga-aga n'ihu na nke anyị anọ post sbanyere Njikwa Window (Windows Managers - WM, na Bekee), ebe anyị ga-enyocha 5 ọtụtụ n'ime ha, site na ndepụta anyị 50 a tụlere na mbụ.
Iji mee nke a, gaa n'ihu mata akụkụ dị mkpa nke ha, dị ka, ha abụghị ma ọ bụ nọ n'ọrụ, que WM ụdị ha bu, gini bu nke ha njirimara bụ isima kedu ka esi etinye ha, n'etiti akụkụ ndị ọzọ.
1.5 Ugboro abụọ
“Fluxbox bụ njikwa windo nke X dabere na koodu Blackbox 0.61.1. Ọ bụ nnọọ ihe dị mfe na ihe dị mfe iji rụọ ọrụ mana ọ ka jikwaa atụmatụ iji mee ka ahụmịhe desktọọpụ dị mfe ma dịkwa oke ọsọ. Ewubere ya site na iji C ++ na ikikere n'okpuru ikike MIT".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ n'ihe dị ka afọ 4.
Ọ na-enye faịlụ dị ike (ngwa-faịlụ) nke enwere ike ịtọ ntọala nke ngwa (windo), dịka, akụkụ, ịchọ mma, oghere ndabara iji mepee, nnyapade na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ na-enye ohere ịmegharị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile nke windo ma ọ bụ ngwa ọ bụla.
Ọ nwere faịlụ igodo dị iche iche (igodo-faịlụ) nke na-enye nkasi obi maka ndị na-enweghị oke ma na-eme ka ọrụ dịrị ndị ọrụ niile mma, ebe ọ na-enye ohere ịhazi faịlụ igodo kwesịrị ekwesị nke na-enyere aka ịchịkwa ihe niile. , na-eme ya ngwa ngwa karịa iji menu nwere naanị igodo, igodo isi na fobs.
Na-enye ihe magburu onwe tabulation na-enye gị ohere iji tabulate windo ọnụ. Enwere ike ijikọ atụmatụ a na njirimara "nchịkọta onwe" nke enyere site na ngwa ngwa, nke na-enye ohere ka ụfọdụ ngwa wee tabe ọnụ na ndabara.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha Ngwungwu "fluxbox"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
"Onye njikwa windo nke Bill Spitzak mepụtara na ebumnuche nke ijikọta echiche kacha mma nke WM ndị ọzọ dị ugbu a site na iji wm2 codebase, nke Chris Cannam kere.".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ n'ihe dị ka afọ 5.
Ọ na-anwa iweghara obere oghere ihuenyo dị ka o kwere mee, ọ dịkwa obere na koodu ọsọ ọsọ.
Na-enye aka bulie bọtịnụ nọọrọ onwe ya maka obosara na ịdị elu. Ọ nwere ogwe ọrụ na nchịkọta nhọrọ. Na-enye ohere windo ịgbanwee site na mkpịsị ugodi «Alt + Tab», na-akwado ọtụtụ kọmpụta. Tụkwasị na nke a, ejikọtara "panel" na "menu mmalite" na otu menu nke na-adịghị ewe ohere ọ bụla mgbe anaghị eji ya eme ihe.
Ezubere ya iji rụọ ọrụ na obere windo na windo jikọtara ọnụ, nke mere na mmemme nwere ike mechaa nwee ọtụtụ windo, karịa ịmanye ya ịme otu windo "mdi" buru ibu. N'ikpeazụ, ọ kwekọrọ na WM site na Motif, KDE, na Gnome, ma na-arụ ọrụ na mmemme SGI nke na-eche 4DWM.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu "flwm"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
"Ma ọ bụn mebere window manager maka X window usoro. Ọ bụ na mbụ a na-adịghị ike ndụdụ nke TWM ghọtara site Robert Nation na 1993, nke ghọrọ usoro n'ime kediegwu, fabulous, ama na mgbanwe window njikwa na ọ bụ taa".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ikpeazụ na ihe na-erughị afọ anọ gara aga.
Ugbu a nwere ụdị anụ siri ike (ochie: 2.6) na ụdị mmepe (ọdịnihu: 3.0). Na mgbakwunye, ọ na-agbaso ọkọlọtọ ICCCM ma nwee ike ịhazi ya nke ukwuu.
Ọ na-enye ohere, site na nhazi pere mpe, iji hazie ma ngwaọrụ dị n'ime yana ngwanrọ nke atọ iji hazie ọtụtụ akụkụ nke desktọọpụ. N'ihi ya, mgbe ejikọtara ya na ngwanrọ nke atọ na ederede ederede, ọ na-aghọ ngwá ọrụ dị ike maka iwuli elu desktọọpụ zuru ezu.
Ọdịdị ọdịnihu ya na mmepe bụ nnukwu njikwa windo desktọọpụ desktọọpụ, sitere na TWM. A na-ezube ka inwe akara ncheta dị ala na njirimara atụmatụ bara ụba, dị ka ị nwere ike ịhazi ya ma nwekwaa ike ịnweta ya, yana ịnwe ndakọrịta Motif (MWM) dị elu.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu "fvwm"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
“Onye njikwa windo hacked dabere na MLVWM (Macintosh Dị ka Virtual Window Manager), ezigbo WM sitere na Takac Hasegawa (hase@rop2.hitachi-cable.co.jp) nwere anya nke MacOS. MLVWM dabere na TWM na FVWM".
Agaghị arụ ọrụ: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ n'ihe dị ka afọ 5.
Ọ na-ejigide ọtụtụ n'ime njirimara nke MLBWM, ya mere o kwesiri ikweko na ya. Ma ọ siri ike, rụọ ọrụ nke ọma ma fechaa.
Enye a otutu virtual desktọọpụ, a Configrableble NchNhr Ogwe, Shaded Windows, Windows chịrị site na menu mmanya. Nile na obere koodu.
Ihe omuma nke HaZe, nke ketara site na MLVWM ma o doro anya na sitere na Mac OS, bu balloons ederede, nke di n'ime ya na-egosiputa ihe omuma banyere windo nke oke ahu na-atu.
"Ọ bụ onye njikwa windo nke ụdị Tiling maka X11 iji Xlib".
Ọ na-enye ohere njikwa dị mfe na nhazi dị mma mgbe ị na-agba ọsọ site na akara iwu, na-ekpo ọkụ (dị ndụ).
Ọ na-enye ngwakọta dị ịtụnanya nke ngwa ntinye aka na ntinye aka, na-eme ka onye ọrụ ọ bụla nwee ike ịhazi nkwụnye akpaka maka ngwa ọ bụla ma ọ bụ gbanwee ngwa ọ bụla site na ntinye aka na ntinye aka.
Jiri akwukwo bash maka nhazi di mfe. Na okpokolo agba (okpokolo agba), onye ọrụ nwere ike iji aghụghọ dị iche iche, yana nwekwara ike hazie atụmatụ ndị a na-efe na ofufe dịka o si atọ ya ụtọ. Na mgbakwunye, ọ na-enyekwa nkwado ọtụtụ nyocha, yabụ a naghị amanye gị ka ị jiri otu nyocha.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha Ngwungwu "herbstluftwm"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị a na-esote 5 «Gestores de Ventanas», n'adabereghị na nke ọ bụla «Entorno de Escritorio», akpọ Fluxbox, FLWM, FVWM, Haze na Herbstluftwm, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Fluxbox, FLWM, FVWM, Haze, na Herbstluftwm: WM ndị ọzọ maka Linux
N'ikpeazụ, ekpebiri m ịbanye ntinye nke "saga" a nke ndị njikwa desktọọpụ ọzọ, m ga-achọ itinye otu ihe: ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ha gbakwunye nseta ihuenyo, ma site na google, devianart ma ọ bụ weebụsaịtị ha, iji nye anyị a ọhụụ nke ihe WM ndị a dị ka ya. E nwere oge mgbe ederede naanị anaghị ezu iji kwenye
Ekele m hụrụ n'anya ma daalụ maka okwu gị. O doro anya na otu onyonyo maka WM ọ bụla ga-abụ ọmarịcha, mana ebe ọ bụ na 5 WM maka ọkwa ọ bụla, nke ahụ ga-eme ka ọdịnaya ahụ buru ibu, maka ọkwa ndị a adịla ogologo karịa ka ọ dị na mbụ. Otú ọ dị, dị ka ị kwuworo, na ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị enwere nseta ihuenyo nke ha, njikọ ahụ dịkwa site na ịpị aha aha nke WM ọ bụla. Ikekwe, emesịa anyị ga-ede ọkwa maka WM ọ bụla na-arụ ọrụ yana ntinye ya na nhazi nhazi ya na nseta ihuenyo ha.
Magburu onwe "saga" ndị a post. Anọ m na-eso ha kemgbe ha malitere. Ana m eche ndi ozo 🙂
Anọ m na i3 ugbu a, ọ dịkwa mma.
Zaghachi Matías M.
Daalụ Matías! Daalụ maka echiche gị dị mma banyere isiokwu ndị metụtara Window Managers (WMs). Anyị ebipụtala nke nwere I3-WM, anyị ga-achọ itinyekwu ozi mana ebe enwere 5 na post ọ bụla, a na-etinye ihe ndị dị mkpa tinyere mgbakwunye njikọ. Kporie ya.